အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှုမုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝ (PD-3000) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:လုံစတားသတ္တု Detector,လုံခြုံရေးစကန်နာမှတဆင့် Walk,metal detector လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk > Checkpiont သတ္တု Detector > အဆောက်အဦးအပြင်အသုံးပြုမှုမုတ်အောက်ရှိလမ်းသတ္တု detector တံခါးဝ (PD-3000)
အလင်းအိမ်နှင့်အတူ6ဇုန် - ရေစိုခံလမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector
အဆိုပါ PD-3000 လုံခြုံရေးတံခါးကိုပို့ကုန်များအတွက်သတ္တုထောက်လှမ်းလုံခြုံရေးတံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေစိုခံ, fireproof တံခါးကို panel ကိုရေစိုခံခြင်းနှင့် fireproof နှင့်အလင်းအလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်လံအလင်းဘား, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင်အာရုံ display ကိုဘုတ်အဖွဲ့, နှိုးဆော်သံအနေအထားနှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်, ပုံရိပ်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်အဖြစ်လူမီနီယံအလွိုင်းကို အသုံးပြု. တံခါးနှစ်ဖက်အပေါ်နှိုးဆော်သံညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုကလျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ပြင်တံခါးဝ၌တည်တတ်၏။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သတ္တုတ္ထုသယ်ဆောင်သောအခါ, တိကျစွာသတ္တုတ္ထုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်ထားဓါး, လက်နက်နှင့်သတ္တုထုတ်ကုန်များအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်အိတ်ကိုအပေါ်သယ်ဆောင်သတ္တုပါဝင်သောဆောင်းပါးများ, detect နိုင်သည့်နှိုးဆော်သံကိရိယာ generate နိုင်ပါတယ်။ , အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်သတ္တုပါဝင်တဲ့သည်အခြားဆောင်းပါးများ, etc, လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်း, anti-theft စစ်ဆေးခြင်း, အဓိကအားဖြင့်အစိုးရအေဂျင်စီများမှာအသုံးပြုတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, procuratorates, တရားရုံးများ, အကျဉ်းထောင်, ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာများ, အကောက်ခွန်, လေဆိပ်, ဘူတာရုံတစ်ခုထိရောက်သော tool ကို, အားကစား နေရာများ, ပြပွဲနေရာများ, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, ကြီးမားတဲ့စုဝေးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဟာ့ဒ်ဝဲ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, လက်ဝတ်ရတနာ, စစ်ရေးနှင့် coinage ကဲ့သို့သောအခြားစက်ရုံများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများ။ သတ္တု Detector မှတဆင့် Walk, သတ္တု detector မှတဆင့်လမ်းလျှောက်သတ္တု detector စျေးနှုန်း & တံခါးဗျူဟာလမ်းညွှန်။
1, 360o All-ပတ်ပတ်လည်အလုပ်, အဘယ်သူမျှမကျြစိကနျးအစက်အပြောက်ဖော်ထုတ်မယ်, အထောက်လှမ်းဧရိယာ၌အသီးအသီး point ရဲ့ထောက်လှမ်းတူညီနေမှုသည်ကောင်းလှ၏
2. Precise positioning ကို: အဆိုပါခြောက်လလွတ်လပ်သောဖြန့်ဝေထောက်လှမ်းဒေသများခွဲခြားထားတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပစ်မှတ်တွေ့ရှိသောအခါ, အသံနဲ့အလင်းနှိုးစက်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အဆိုပါညွှန်ကိန်းအလင်းအိမ်တိုက်ရိုက်တိကျစွာနေရာချထားခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံပစ်မှတ်များ၏တိကျသောအနေအထားပြသနိုင်သည့်အတွက်နှိုးစက်ဧရိယာ, ဖော်ပြရန်။
3, modular ဒီဇိုင်း: modular ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, အမှားဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ စစ်ဆေးရေးဂိတ်သတ္တု Detector, လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်သတ္တု detector ။
4. microprocessor နည်းပညာ: အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ အားလုံး parameters တွေကိုအမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ control panel ထဲကမှတဆင့်အစီအစဉ်နှင့် preset နိုင်ပါသည်။
5, ပေါင်းစပ် circuit ကိုဒီဇိုင်း, အနီအောက်ရောင်ခြည်စက်ကို, ကွန်ပျူတာအလိုအလျှောက်မှတ်ပုံတင်, ထိထိရောက်ရောက်မမှန်သောလက္ခဏာနှင့်မှားယွင်းသောဆိုးကျိုးကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး, အလိုအလျှောက်နိုးစက်၏နံပါတ်, ဖြတ်သန်းလူများ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်လို့ရပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်သတ္တု detector မှတဆင့်သွားလာရကြ၏။
6, DSP signal ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် filtering ကိုစနစ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Anti-လျှပ်စစ်သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စွမ်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောတိုက်မှုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, လူစည်ကားအခြေအနေများအောက်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် run နိုင်ပါတယ်။
7, ပု sensitivity ကိုချိန်ညှိဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးချင်းစီထောက်လှမ်းတည်နေရာအသုံးပြုသူရဲ့ထောက်လှမ်းလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီထိန်းညှိဖို့အခမဲ့, sensitivity ကိုချိန်ညှိ 100 အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။
8, စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုထောက်လှမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အလိုအလျှောက်ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်ကနေဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုတိုင်းနှင့် display ကိုလုပ်နိုင်စွမ်းတပ်ဆင် site ကိုရွေးဖို့ကူညီပေးသည်။
9. Password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆက်တင်: password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ function နှင့်အတူ, parameters များကိုသာမှန်ကန်သော password ကို inputting ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ non-အော်ပရေတာလုံခြုံရေးတံခါးကို parameter သည် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်နှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသောအရာ function ကို, setting ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
အားနည်းသံလိုက်စက်ကွင်းကိုထုတ်လွှတ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. လက်ရှိနိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီခုနှစ်တွင် 10 သည်, pacemaker စသည်တို့ကိုခါးပတ်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, floppy disks ကို, ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ, တပ်ဆင်ထားသည်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။
11. Adjustments ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါင်းစပ်အကြိမ်ရေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပျလုပျဖို့မျိုးစုံလုံခြုံရေးတံခါးများနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း II ကို။ နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ
1. ကုမ္ပဏီ ISO9001 လွန်ပြီ: 2008 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အအောင်လက်မှတ်။
3. အတိအကျ GB ကို 15210-1994 ၏အမျိုးသားရေးစံနှုန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်။ pass-မှတဆင့်သတ္တု detectors အများအတွက်အထွေထွေနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ။
4. အခြေခံဘေးကင်းလုံခြုံမှု: GB4793 ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။
5. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘေးကင်းလုံခြုံမှု: အ NILECJ-0601 စံတွေ့ဆုံ။
6, ဓါတ်ရောင်ခြည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု: EMC လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ
အပိုင်း III ကို။ နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
ထက် ပို. လူ 45 / မိနစ်: 2, ပုဂ္ဂိုလ်များနှုန်းကိုဖြတ်သန်းရတယ်။
အပိုင်း IV ။ ကို Standard configuration:
အဓိကကိုယ်ထည်: တဦးတည်းလက်ဝဲစုံစမ်းစစ်ဆေး: တဦးတည်းပိုင်ခွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး: တစျခု
Computer ကိုဦးခေါင်းလိုင်းနှစ်ခု screw နှစ်ခု: ရှစ်အစုံ
manual: (certificate နှင့်အာမခံအပါအဝင်) တစ်ခုမှာ
အပိုင်း V. ဝယ်ယူဆက်စပ်ပစ္စည်း:
1. ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျး: ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ, သင်ဒီမှာထံမှအချို့ဝင်ရောက်စွက်ဖက် (ထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းများအဖြစ်နာရီ) ပစ္စည်းများကိုလျှောနိုင်ပါတယ်။
2. Remote ထိန်းချုပ်: အဆိုပါတစ်ခုတည်းသောစက်ကိုအဝေးမှတဆယ်မီတာအတွင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး, ချိတ်ဆက်သောအခါထိန်းချုပ်မှုအကွာအဝေးရှည်သည်။
3. ဘက်ထရီ: အားသွင်းပြီးနောက်, ပါဝါပျက်ကွက်၏အမှု၌လေးနာရီလုပ်ကိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ထောက်ခံပါတယ်။
4. Handheld လုံခြုံရေး detectors အစနှိုးဆော်သံ၏တည်နေရာနောက်ထပ်လက်-ကျင်းပသတ္တု detectors အနေဖြင့် check လုပ်ထားနိုင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုနှင့်ကြီးကြပ်မှုတိုးတက်ရာ။
လုံစတားသတ္တု Detector လုံခြုံရေးစကန်နာမှတဆင့် Walk metal detector လုံခြုံရေးစစ်ဆေးခြင်း လက်ကားသတ္တု Detector လက်ကားသတ္တု detectors မုဆိုးသတ္တု Detector ကျေးဇူးသတ္တု Detector မူရင်းသတ္တု Detector